अल्मुताइरीले नेपाल छोड्ने निर्णय लिनुको अन्तरकथा यस्तो रहेछ !
२५ जुलाई २०२१ । मलाई मिति अझै कण्ठ छ । नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष रवी राजकर्णिकारको फोन आएका थियो । लामो समय खेलकुद रिपोर्टिङबाट बाहिर रहे पनि उनीसँग मेरो बेलाबेलामा नेपाली खेलकुदको विषयलाई लिएर कुराकानी हुने गर्छ ।
उनले खेलकुदकै प्रसंगमा फोन गरेका रहेछन् । भने, ‘नवीनजी थाहा पाउनुभयो ? नेपाली फुटबल कोचले त राजीनामा दिए नि ।’उनको कुराले सुरूमा मलाई त्यति छोएन । फेरि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा ६-६ महिनामा प्रशिक्षक फेरिनु अनौठो कुरा थिएन । जवाफ दिँदै भने, ‘थाहा पाएँ । तर, मेरो भेटघाट भएको छैन ।’
मेरो जवाफ सुनेपछि उनले फेरि भने, ‘यहाँ बबाल भइसक्यो । उसको राजीनामाले कतारी राजदूत तनावमा छन् । टिकट काट्दे- भोलि घर फर्किन्छु भनिरहेको छ ।’
रवीसँग कतारी राजदूतको पुरानो सम्बन्ध मलाई थाहा थियो । त्यही सम्बन्धका कारण प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीको ‘राजीनामा प्रकरण’ हल गर्न राजदूतले रवीसँग सल्लाह मागेका रहेछन् । रवीले मसँग र म त्यतिबेला काम विशेषले लहानमा थिए ।
मैले भनेँ, ‘म त काठमाडौंबाहिर छु । मेरो विचारमा राजदूतको अग्रसरतामा एन्फा पदाधिकारी, दुवै झगडियालाई बोलाएर कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसबाट जे निस्किन्छ, समाधान नै त्यही हो ।’
नेपालमा चुरोट पिएको विषय उछालिएपछि उनको परिवारले नेपालमा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका र पोर्टल खोजी गर्न थाले । यस्ता पोर्टलमा नेपालमा पछिल्लो समय ‘एसिड अट्याक’ बढेको भन्ने न्यूजले उनको परिवारलाई चिन्तित बनाएको थियो ।
बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, झगडाको कारण एउटा समाचारलाई लिएर रहेछ । एउटा न्यूज पोर्टलले अभ्यासका क्रममा मैदानबाहिर चुरोट पिइरहेका प्रशिक्षक अल्मुताइरीको विषयमा समाचार बनाएको रहेछ ।
त्यो समाचार एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङले लेखाएको आशंकाका बीच प्रशिक्षक अल-मुताइरीले आफ्नो सोसल मिडियामा पोस्ट गरेका रहेछन्, ‘म राजीनामा दिन एन्फा जाँदैछु ।’उनले नेम्वाङलाई मेन्सन गरेर लेखेको ‘तिमी खुसी भयौ होला’ भन्ने स्टाटस नै समस्याको मूल जड बनेको रहेछ ।
बुधबार बंगलादेशलाई १-१ गोलमा रोकेर नेपाल साफ च्याम्पियनसीपको फाइनलमा पुगेपछि अल्मुताइरीले भारतविरूद्धको फाइनल खेल नै आफ्नो अन्तिम हुने घोषणा गरे । उनको घोषणा पछाडिको कारण यही कचपल्टिएको विवाद हो ।
मैले बंगलादेशविरूद्ध नेपालको खेल हुनुभन्दा अगाडि ‘अल्मुतारी अग्नी-परीक्षा’ लेख्नुको पछाडि यही कारण थियो । बंगलादेशसँगको खेल हारे पनि, जितेपनि उनले यही निर्णय गर्थे । त्यसमा म निश्चिन्त थिएँ ।
वास्तवमा अल-मुताइरीलाई त्यो न्युजभन्दा पनि त्यसमा आएको ‘कमेन्ट’ ले बढी निराश पारेको थियो । त्यसमा धेरै भद्दा कमेन्ट थिए । उनी सानोभन्दा सानो कुरा परिवारसँग सेयर गर्छन् । नेपालमा भइरहेको गतिविधि पनि उनले परिवारसँग सेयर गरेका थिए ।
रवीसँगको कुराकानीपछि मेरो सुझाव स्वीकार गर्दै कतारी राजदूतले सबै पक्षलाई राखेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, एक दिनअघि कतारी राजदूतलाई उपस्थित हुन्छु भनेर वचन दिएका नेम्वाङ भोलिपल्ट बैठकमा गएनन् । कुरा त्यहीँ भाँडियो । नेम्वाङको व्यवहारप्रति राजदूत निकै दुःखी थिए ।
अल-मुताइरी कुवेती राजपरिवारका पनि प्रिय पात्र हुन् । केही वर्षअघि कुवेती राजाको बेलायतमा मुटुको शल्यक्रिया हुँदा उनी अस्पतालमै कुरुवा भएर बसेका थिए ।
कतारमा सन् २०२२ मा आयोजना हुने विश्वकप फुटबलमा नेपाली श्रमिकले रंगशाला निर्माणमा गरेको योगदानबाट द्रविभूत भएर कुवेती नागरिक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीलाई नेपालको प्रशिक्षक बनाउन कतार सरकारले नै पठाएको थियो । त्यसैले अल-मुताइरीको ‘राजीनामा प्रकरण’ कतार सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो ।
कतारी राजदूत यो प्रकरणले नेपाल-कतारको सम्बन्धमा असर पर्ने चिन्तामा थिए । त्यसैले पनि उनले सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर समस्याको समाधान गर्न खोजेका हुन् । तर, नेम्वाङ नआएपछि त्यो सम्भव भएन । वार्ता असफल भएपछि पारिवारीक कारणले कतारी राजदूत एक महिनाका लागि स्वदेश फर्किए ।
यसबीच समस्या बल्झिँदै गयो । रवीलाई हरेक दिन अल-मुताइरीले राजदूतलाई भनेर फर्किने टिकट बनाइदिन आग्रह गरिरहेका थिए । अल-मुताइरी आफैं टिकट काट्न नसक्ने होइनन् । तर, कतार सरकारले टिकट उपलब्ध गराइदिनु उनको लागि सजिलो ‘एक्जिट’ थियो । यसकारण कि उनी कतार सरकारको अनुबन्धमा नेपाल आएका हुन् ।
रवीले ‘प्रेसर’ थेग्न नसकेपछि पुनः मलाई फोन गरे- ‘उ नगइ छोड्दिन भन्छ । के गर्ने नवीनजी ?’ फेरि नेम्वाङ र अल-मुताइरीबीच कुराकानी हुन नसकिरहेको बेला उनी पनि तनावमा थिए ।
मैले रवीलाई भनेँ, ‘उसलाई भन्नुस् न, यत्रो साफ च्याम्पियनसीप आइसकेको छ । नेपाल अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसीपको फाइनल पुगेको छैन । तिमीले फुटबल खेलाउन सक्दैनौ भनेर आलोचना गर्नेका लागि जवाफ दिने राम्रो अवसर हो ।
फेरि तिमीले खेलाडीलाई पनि आफ्नो लयमा ढालिसकेका छौं । यतिबेला छोड्यौं भने सबैले तिमीलाई भगौडा भन्छन् । नेपाललाई साफ च्याम्पियन बनाएर आलोचकको गालामा एक चड्कन हिर्काएर जाउ न । यसले तिम्रो कद पनि बढ्छ ।’
मैले बंगलादेशविरूद्ध नेपालको खेल हुनुभन्दा अगाडि ‘अल-मुताइरीको अग्नी-परीक्षा’ लेख्नुको पछाडि यही कारण थियो । बंगलादेशसँगको खेल हारे पनि, जितेपनि उनले यही निर्णय गर्थे । त्यसमा म निश्चिन्त थिएँ ।
रवीले ठ्याक्कै यस्तै भनेछन् । अल-मुताइरीले त्यसपछि उनले रवीसँग कुनैबेला पनि टिकटको कुरा गरेनन् । कतारी राजदूत पनि दंग । यसैबीच नेम्वाङ र अल-मुताइरीको ठमेलमा भेटघाट पनि भयो । पुरानो कुरा बिर्सिने सम्झौता पनि भए । दुवै मिलेर ‘ज्वाइन्ट स्टेटमेन्ट’ दिने कुरा पनि गरियो । तर, अल-मुताइरीले ‘स्टेटमेन्ट’ निकाल्ने कुरालाई टारेर प्रशिक्षणका लागि पोखरा हिँडे ।
उनले संयुक्त वक्तव्य ननिकाल्नुको पछाडि, त्यही मनोभावनाले काम गरिरहेको थियो- नेपाललाई जसरी पनि साफ च्याम्पियनसीप जिताएरै छाड्न र उतैबाट बिदा लिने ।
आखिर उनले गरे पनि त्यही । माल्दिभ्सलाई १-० ले हराएपछि खेलाडीसँग अंकमाल गरेका अब्दुल्लाहको भावुकता मैदानमा सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो ।
उनी मैदानमा किन त्यतिधेरै उद्देलित थिए ? नेपालले श्रीलंकाविरूद्ध गोल गर्दा उनी केटाकेटी जस्तै किन उफ्रिरहेका थिए ? यी सबैमा उनको पीडा लुकेको थियो । बंगलादेशलाई १-१ गोलको बराबरीमा रोकेर नेपाल साफ च्याम्पियनसीपको फाइनल पुगेपछि उनको भावुकता मैदानमा त्यसैगरी पोखियो ।
श्रीलंका र भारतबीच खेल भइरहेको बेला नेपाली म्यानेजर कृष्णभक्त मानन्धरको फोन एक्कासी मेरो म्यासेन्जरमा आयो । त्यतिबेला म माले रंगशालामा उपस्थित थिएँ । उनले भने, ‘कोच तपाईंसँग कुरा गर्न चाहिरहेका छन् ।’
मलाई अचम्म लाग्यो । किन कुरा गर्न लागेका होलान् ? सोचमग्न भइरहेको बेला अल-मुताइरीले सोधे, ‘रिजल्ट के छ ?’
वास्तवमा भएको के रहेछ भने, श्रीलंका र भारतबीचको खेल राष्ट्रिय टोली बसेको रिसर्टमा खेलाडीसँगै बसेर हेरिरहेको बेला ‘नवाज’ पढ्ने टाइम भएछ । र, लाइभ गरिरहेको टेलिभिजनले फुटबल छाडेर झयाप्प ‘नवाज’ पढ्न पो थालेछ ।
८० मिनेटको बराबरीमा पुगेको बेला यो घटना भएपछि उनले नतिजा सोध्न फोन गरेका रहेछन्। अन्तिममा मैले खेलको नतिजा ‘गोलरहित बराबरी’ सुनाउँदा उनी फोनमा भनिरहेका थिए, ‘राम्रो डिफेन्ड गर्‍यो, श्रीलंकाले ।’
प्रशिक्षक आउँछन्, जान्छन् । कोही निकै राम्रो होलान्, कुनै ठिक्कका । तर, अल-मुताइरीबाट नेपाली फुटबलले लिनसक्ने कुरा धेरै थियो । अल-मुताइरीलाई उसको देश पठाएर हामी फुटबलमा ‘प्रतिगमन’ निम्त्याउँदैछौं ।
अल-मुताइरीबाट नेपाली फुटबलले अवसर पाउन लिन सक्थ्यो । एक वर्षको छोटो अवधिमै उनले नेपाललाई साफ च्याम्पियनसीप जस्तो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताको दाबेदार बनाइदिए । उनलाई नेपालले प्रशिक्षकको रूपमा मात्र नभई नेपाली खेलाडीलाई मध्यपूर्वी देशको लिग फुटबलमा आबद्ध गराउने पुलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।
उनीमार्फत नेपाली फुटबलले कुवेत सरकारबाटै विकासका थुप्रै परियोजना भित्र्याउन सक्थ्यो । तर, एउटा सामान्य विवादले चर्को रूप लिँदा उनी नेपाल छोड्ने निर्णयमा पुगे । यो नेपाली फुटबलप्रेमीका लागि ठूलो घाटा हो ।
प्रशिक्षक आउँछन्, जान्छन् । कोही निकै राम्रो होलान्, कुनै ठिक्कका । तर, अल-मुताइरीबाट नेपाली फुटबलले लिनसक्ने कुरा धेरै थियो । अल-मुताइरीलाई उसको देश पठाएर हामी फुटबलमा ‘प्रतिगमन’ निम्त्याउँदैछौं । @nepalpress